Uxinzelelo evela imikhosi yeedemon kuyinto eyenzekayo | Apg29
Ngoku ndifuna ukuba ukungqinela ngcolile ndiye ndabona phantsi koxinzelelo oluvela imikhosi yeedemon.
Uxinzelelo evela imikhosi yeedemon yinto eyenzekayo ephuma nemimoya emdaka. AmaKristu Live, njengoko uYehova waba isipho yovavanyo umoya ngokuqhelekileyo baziva kolu xinzelelo. Mna-ethe kakhulu ngomoya wam kwaye singqine ukuba Ndiye esi senzeko.
Ukuba ndithe ndaphuma edolophini, ndiya kuhlangana umntu onomoya ukubanda okukhulu kuye. Emva koko ndiziva ngathi "omfuthelayo" iyinqambi kum kuloo mntu.
Okwahlukileyo - ukuba udibana umntu ukuthambisa oku kuyakhukhumalisa njengomlambo elimnandi kumntu.
amandla yeedemon Iibhotile utywala
I maxa wambi uye ngaphaya Systembolaget aziwayo yeedemon amandla elifut- yeebhotile utywala. Ndiyakuqonda ngamandla yeedemon umsi wecuba.
Xa kukho izinto inkqubo zaziligezela kwi TV kuyakhukhumalisa imikhosi ezingatyiwayo nxamnye nam. Ngoko ke iinkqubo ze embi nezonakalisayo.
Xa iishedyuli lwenkqubo ingxelo phambi ngokuqhelekileyo kuba izinto ezingasenza emdaka umphefumlo wam ukuba uYesu ahlambe ngegazi lakhe elixabisekileyo. Ngenxa yoko, mna uvale amehlo am ubambe iindlebe zakhe ukuze uphephe kokubona nokuva kubo.
Ndiziva mculo yeedemon, ingakumbi xa kukho izinto zikaSathana. Andizange baphulaphule loo "mculo", ngokuba ndiziva ukuba ezimbi kangaka. Andiyithandi rock ngokubanzi. Kodwa weva kodwa ukuba unqwenela oko.
Abanye xesha eyadlulayo, ndandihlala kwindawo apho amasela ibhayisekile ezibe uyaguquka. I ndaxuthelwa ibhayisekile yam, leyo ndazifaka ngaphandle kwesakhiwo ndandihlala khona. Ukuba ndikhumbula kakuhle, le ibhayisekile utshixeke, kodwa kunjalo ezibiweyo.
Umntu wanika nealam ukuba aye Park Abantu, kuba abantu ezisetyenziswa ukushiya Bikes ibiwe kum.
Ndawuthobela kwiBhunga waya epakini ukukhangela ibhayisekile yam. I wajikeleza efuna kuyo yonke indawo. Entertainment Iziganeko ebewagqibile yaye abantu bashiya epakini, kodwa ndaziva esomelela emoyeni wam ukuba nemikhosi yoomoya abangendawo usamthanda. Ngakubona isimo siba enjalo.
Andinakuze ndibe nako ukuya isiganeko cinema, umdaniso, bexhamla iziganeko okanye ezinye iindawo zokuzonwabisa. Bendiya lwenzeke dirty kunye nomoya zaziligezela ukuba akukho baye banyamezela ukuba ibe khona.
I kunazo ndiye ndafumana
Ngoku ndifuna ukuba ukungqinela ngcolile ndiye ndabona phantsi koxinzelelo oluvela imikhosi yeedemon. Ngakubona ngaphandle kwi Vasaloppet e Insha endlwini.
indlu Vasaloppet yabe bytardagar of Vasaloppet naliti. Abantu ukuze uhlale apho exchange, ukuthenga nokuthengisa kubo. umfazi wam ukuba abanye ukuba wayesiya sell, ngoko ndaya naye endlwini Vasaloppet kaThixo. Kanye njengoko wema emnyango kwigumbi, ndandiziva nangeengcinga, 'Yintoni a mood zaziligezela oxhaphakileyo apha. "
Emva koko waya phandle kwengaphambili intendelezo; apho waziva ziinqambi, umoya ezimbi ngakumbi.
Kwigumbi elingaphantsi kwakukho igumbi abo batshintsha apho iinaliti zabo behleli ezitafileni zabo. Siye saya phantsi apho wabona ukuba kwakukho abantu abaninzi apho abantu babefuna ukubeka iinaliti zabo.
namademoni kukhiwa ekundilungiseleleni
Xa engena kwigumbi kwafaka imikhosi yeedemon nxamnye nam amandla omkhulu. Kwaba ngathi umntu yegorha Undityhale ngasemva. Ndandiza agxadazele yakhe yaye phantse wawa phezu.
Kodwa ke step uMoya oyiNgcwele ngamandla amakhulu ngaphakathi kwam, njengoko counterweight nxamnye nemikhosi yeedemon. Ndaziva yayinyuka kwaye kwenziwa nguMoya oyiNgcwele.
Thina zigcinwa baye kwilizwe lemimoya ukuze balwe. amandla alo abanto kudlala. Ndikhe ngokwenene ndakwazi ukuba lwenzeke. Kufuneka kuzaliswa nguMoya oyiNgcwele, uphile ngenxa negazi likaYesu yokhuseleko kufuneka alondolozwe.
UYesu uye wahlasela amandla yobubi. Enobungangamsha kwaye owalihluthayo abaphathi ubukhosi yobubi. Lubutyumzele intloko yenyoka waza wenza amandla umtyholi ngayo nto. Kukho ilizwi likaThixo, siyixhase inkalipho yethu kwaye izisa intuthuzelo:
"Abantwana othandekayo, wena uvela kuThixo weyisa phezu kwabo, ngokuba ngubani na kuni mkhulu kunalowo usehlabathini" (1 Yoh. 4: 4).